VIDEO: Shirkii Afisyoone oo lagu kala kacay & DFS oo shaacisay in Puntland iyo Jubbaland xalkii diideen.
April 7, 2021 Xuseen 15
Puntlandtimes (MUQDISHO)-Wasiirka Warfaafinta Soomaaliya ayaa ka warbixiyey Natiijada Shirkii madaxda dowladda federaalka dowlad Goboleedyada iyo Gobolka Banaadir, kaas oo aan wax hehsiis ah lagu garin.
Dowladu dadka ayadaa masuul
Ka ah dani iyo madobe
Somalidu way aragtaa halaga
Qaado talaab adag shacabka
Puntland wadiyaar in aay
Dhacado dorasho laakiin
Ninkan dani ah oo ah
Aan ku habonayen inuu hogamiyo puntland iyo axamed
Madobe kismanyo un kulugo
Goan ayaa mixnad ahdowladu
Awood ha isticmaasho dalka
Lagu badbaadiyo waa in aay
Ciidanka somalia xoreeyaan
Jubada dhexe si deg deg ah
Dani asagaa yaqaan masha
Uu aadaayo qof rabana malaha
Because waa manaxe aad u
Garsho gaaban ………
Taa macnehaadu waa qas wadayaasha oo ah doqon deni iyo maangaab madoobe in xabsiga xalane ay kusii jiraan . Inta Maamulada jubbland iyo puntland ay ka soo dooranayaan madaxkale oo dowlada lashaqeeya . Kkkkkk MAGACII AY LABAXEEN BADBAADO QARAN MA AHEE EE WAA NABADBAADIYA KKKKK WAA XOOLO XABSI KUJIRA. DOWLADANA SOMALIA HAWSHOODII HA QABSADEEN .
Kuwani waa isma dhaanto. Kan Burco ka soo shaqo tageyna waxa uu rabaa inay isku dubanto oo iskaga huleelo illeen meeshiisii waa nabadee!
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد
Sheikh waxaad eed aad dusha ka saartay laba Dawladgobaleedyo.Adiga oo iga raali ah ma waali bay kaatahay mise Nacasmino..intaas aad sheegtay ee shir ee dhacay waxa loo sameeyey Dawlada dhexe iyo Dawladgobaleedyada ta tirsan Dawlada dhexe..Mar uqadha looma yeedh Somaliland Markaa adigu xagee ayaad ka soo helaacday waxa is haya waxa weeye dadka wax isku darsaday ee adigu wanted ayaad ka tahay Somaliland…Haddii aanu Somaliland nahay dhex ayaanu ka nahay arinta reer Soomaaliya haddii ay noobaahdaana diyaarbaanu u nahay inaanu dhex ka noqono..MARKAA sheikh dulsaarbaad ku tihiin ee haysku dira dadka reer koonforeed ee walaala ah.
Madaxweyne Deni iyo Madaxweyne Axmed Islaam waa guteen waajibkoodii maadaama ay bil dhan airportka ugu xayirnaayeen shir ay ogaayeen in aan Farmaajo daacad ka ahayn. Awalba waxay u yimaadeen in aan iyaga lagu eedayn in aanay wadahadal doonayn laakiin way ogaaayeen in doqonka macangagga ah aanu ku qancayn wax aan ahayn inuu kursiga kusii fadhiyo.
Waa layaab inuu isu haysto in samada looga waxyooday inuu kursiga ku fadhiyo. Bal nin aan awood u lahayn inuu inta dadka soo hor-istaago la hadlo amase aan si furan oo fool-ka-fool ah saxaafaddu su’aal u weyddiiso, oo haddana, doonaya inuu u taliyo 15 Million oo Soomaali ah!
Waa ninka sidii saaxiibbo qadiim ah — marna jilbaha saaraya marna garabka gacanta ka saaray gaalka Abiy Ahmed! Waa wax laga yaqyaqsado oo ceeb ku ah protocol-ka madaxweynenimo. Soomali uma wakiilan inuu kalgacaylka caankaas ah u muujiyo Abiy Ahmed iyo Amxaaro. Waxa uu Soomaali ula heshiinwaayey oo uu isku hallaynayaa waa Abiy iyo Afwerqi. Bal aan aragno waxa ay u taraan.
Maxaa ku jaban in cid kasta oo saamayn leh ay shirka ka qaybgasho? Maxaa ku jaban in laga wadahadlo ammaanka doorashada? Maxay tahay kalsoonidarrada haysata? Ma wuxuu doonayaa inuu isagoo sharciyaddiisii dhacday uu usii taliyo sidii nin sharciyad haysta?
Wuxuu doonayaa inuu shilimaadka Soomaali loogu deeqay iyo inta canshuurta looga qaado uu u isticmaalo inuu diyaarado ugu daadgureeyo maleeshiyadiisa gobollo fogfog si uu u gaaro ujeeddo shakhsi oo keligitalisnimo iyo mid jifo-hoosaad oo ku salaysan riyo iyo boob.
Fursadda keliya ee hartay waa waxa ay sameyn doonto beesha caalamku. Waxaa xaqiiq ah inaan China iyo Ruush waxba u tarayn isla markaana aysan veto ku isticmaali doonin Golaha Amaanka si uu kursiga ugu sii fadhiyo. Maxay ugu xilanayaan China iyo Ruush? Ma Villa Somalia ayuu ka gadayaa illeen meel kale kama taliyee?
Ugu dambeyn, arrintu waxay isugu soo shuban doontaa Xamar iyo gacan ku-haynteeda. Waxaan filayaa in reer Muqdisho hore uga tashadeen tallaabada ay qaadi doonaan marka arrintu cuyuban gaarto. La arki doonee halka ay ku dambeyso.
Deni was halyeey wlhy waarag maxuu qaraar warka kakigiitaliska iskadaaya cadifadee ninku habanero kursiga waqtigiisii dhaaye mantoo than dani iyo madobe shegeysaan war bal arki kan fadhiya sharcidaro
Xaarmaajo isagu ma hadli karo waxa uu yidhi.. Dube. adigu dadka beeenta u sheeg.
Canaasiirta halkan ka barooranaysa waxaan u sheegayaa Xarmaajo dalkan waxba laga waydiinmaayo waana tegayaa isagoo dulaysan oo bahdilin. Dalkan dadkii lahaa oo u talin jiray ayaa u talindoona no more inangumeed inangumeed dhalay ilkayar ah wax laga waydiinayo. Shirkan awalba waa la ogaa inan waxba kasoo socon markii nin afar sano ku fashilmay hogaaminta dalkan hadana villa wardhiigley dhex fadhiya isagoo wakhtigiisii dhamaaday talo la waydiiyay ayaa qaladka ugu wayn la galay. Xarmaajo xaarkii ayaa ku dhegay laakiin futadadaa farta laga gelin. Ninkii dhoof ku yimi bay geeridu dhibaysaa ninkasta goofkiisa ha aaado Muqdisho dadbaa leh una tashanaya.
wasir dube ilahay ku aburdey ka baqdi maxa beenta kula xaqsadey war dube marka ladhahay waxa lagu so daraya madaxwey yashi hore iyo aqalka gore iyo aqalka hose aya didan markas aya ladahay puntland jubland ba didey war dubebeenlo nahab calosha ushaqasde ba tahay ord farjamo dabada udhaq war dube intas aya la agdahay been iyo nahabnimo gama dhamado tuug ba tahay oo qiyalo war dube marka runta lagu shegyey miya dideysaha oo ludhahay madaxwyn yasha punland jubland markey kudhahan madaxwyn yashi hore iyo aqalka gore iyo aqalka hore ba lagu sao darayah wa run wa sax hadalkas daroosho la yaqano iney dhacdo wa sugayan umada somaliyad melkasta jogan anigo ahmed mooye leydhaho waxa ushegaya umada somaliyad melkasta ad jogdin doorashadan waxey u dhici weysy wa tuugda farmajo wado oo ka kow yahay dube bye
Guul Guul Madaxwayne Dani iyo Madaxwayne Madoobe maantay markale waxaa lasoo afjaray riyo maalmeed kii ini fargaajo ee uu ku doonayay boobka doorashada dalka. Waa tii awal 17 September 2020 lasoo afjaray riyo maalmeed kii ku darsiga maanta waa maalin kale oo Guul ah. Illah ayaa mahad le ka dibna waxaa mahad leh badbaadiyeyaasha unada soomaaliyeed mudane Saciid Dani iyo Mudane Axmed Islaam xadidullahu. Waa guul umada soomaaliyeed usoo hoyatay waxaa la beeniyay fariintii ay Afwargi iyo Abi oromo usoo dhiibeen dhoohane dhimirlaawe Xarmaajo. Dalkan dadkii lahaa oo taladiisa goyn jiray ayaa wax laga waydiin no more inangumeed inangumeed dhalay iyo canaasiirta Daarood yar yaraha gunta ah. Guul Puntland guul Jubaland Guul badbaado qaran.
Kkkk maanta waxii kadambeeya deni iyo madoobe waa la heystayaal jooga xeradii xalane ee xamar kkkkk emarite iyo kenya waa in ay soo badbaadshaan kkkk doomo iyo helicopter waa in ay soo diraan . ALLA NABADBAADIYA !! ĶKKĶKKĶKKKKK
War ileen adaa wax arkay Farmajo waa jiho diid FISH WITHOUT WATER MARKALUU DUBE KA DHAWAAJIYEY. MASIIRKA umada somaliyeed meel hala saaro DENI, SAYID AHMED MEELNA UMA DHAQAAQI KARAAN ILAA AY MEEL KU HUBSADAAN MASIIRKA UMADA SOMALIYEED.GAREENO WARKOIDA CIDI UMA BAAHNA BARI BUU DIYUURAD U SAARIN ANKARA SI AY U SOO NASTAAN. ROAD MAP 🗺 DEG DEG AH HALA HELO SOMALI WAA TRIBES KURSIGANA DAAROOD BUU UGU FADHIYAA MA KA BIXI KARAAN MOGADISHU IYAKA IYO INTA COALITION KA YIHIIN IYO SIYAASIYIINTA MUCAARADKA AH ROAD MAP HA SOO SAARAAN ABDI HASHI BAA DALKA MADAXWEYNE KA AH LAGA BILAABO MAANTA AWALBA ISAGAA KA AHAA MADAXWEYNE DADBAN OO DADKA ISKU WADAY FARMAJO’S GAME OVER.
Wadh wadh laga bilaabo bari ma bixi karaan deni iyo axmed madoobe illaa ay ama ogolaadaan doorasho ama ka tanaasulaan kuraasta ay ku fadhiyaan ee juppaland iyo puntland warkaas waxa laga helayaa ila ku dhaw dhaw beesha caalam ka, xalane kama bixi karaan.
War waa sidee sibaad iskugu Dhex yaacsantahaye!
Waxaad tiri dalkan Dadkii u talin jiray ayaa wax laga weeydiinayaa! Inan Gumeed Ilaka yar ah waxba laga weeydiin maayo!! Kkk
War been bay kuu sheegeene, ninkii talin jiray waa ninka hadda Kursiga ku fadhiya! Kkk
Soomaali 30 sano ayaay Dowlad dhisan ahayd, 21 Sano oo makid ahna Ilka yar ayaa loo gaardiyaye waayo dadka kale ee talin jiray?! Kkk
Hadalkaaga haddii aan raacno, dadkii talin jiray nin ah ayaa kursiga haddeerba ku fadhiyee ha loo gaardiyo Kursigiisi buu soo ceshadaye! Kkkk